अब यसरी बच्नुहोस कालो ढुसीको ससंक्रमणबाट, यी उपाय अपनाए सजिलै बच्न सकिने – Sandesh Press
June 6, 2021 423
नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण भइसकेका बिरामीमा कालो ढुसीको सङ्क्रमणसमेत देखा परेको छ । समयमै सचेत भए कालो ढुसीबाट बच्न सकिने चिकित्सकको सुझाव छ । यो लेख गोरखापत्रमा प्रकाशित छ ।स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशका विभिन्न स्थानमा गरी १० जनामा कालो ढुसी रोग लागेको जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले कोरोना सङ्क्रमण भई उपचार गराइरहेका र निको भइसकेकाहरूमा कालो ढुसीको रोग लागेको जानकारी दिनुभयो । डा. पौडेलका अनुसार हालसम्म वीरगञ्ज, काठमाडाँै, नेपालगञ्ज, कैलालीलगायतका ठाउँमा कालो ढुसीका रोगी पाइएको जानकारी छ । कालो ढुसी प्राणघातक भएकाले सचेत रहनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
Nextमन्त्रिको गाडी समात्ने बहादुर प्रहरी, भन्छन- ‘ठूलो सानो भनेर जो कोहीको पनि छोड्ने कुरा हुँदैन’